Ahoana ny fomba fitetezana ny fahaketrahana amin'ny fifandraisana (ho an'ny roa tonta) - Fifandraisana
Ahoana ny fomba fitetezana ny fahaketrahana amin'ny fifandraisana (ho an'ny roa tonta)
Ny fifandraisana dia sarotra amin'ny toe-javatra tsara indrindra.
Ny fifandraisana iray dia mampiharihary anao ny zavatra tsara tarehy rehetra sy tsy dia tsara loatra momba ny vadinao.
Ny famoizam-po dia manampy fanamby hafa tanteraka amin'ny fifandraisana, satria tsy misy tena mampianatra antsika ny fomba hahitana fifandraisana salama amin'ny aretin-tsaina.
tsy izany fotsiny no famantarana ataonao ao aminao
Betsaka ny mahatafintohina sy mahita zavatra rehefa mandeha ianao satria ny fomba samihafa dia mety kokoa amin'ny olona samy hafa.
Ny famoizam-po dia manasarotra ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny fiatraikany amin'ny fiasan'ny olona sy ny fahitany an'izao tontolo izao.
Maharary sy sarotra ny mijery olona iray tianao dia mijaly amin'ny alàlan'ny tsy fahasalamana.
Ny hevitr'izy ireo momba ny tenany dia mety hilatsaka, mety hahatsapa ho tsy misy fanantenana izy ireo, ary toa tsy maninona izy ireo. Ary mahatsapa fa na inona na inona lazainao mifanohitra amin'izay dia tsy misy resonance mampihetsi-po.
Ny fomba entin'ny famoizam-po mampihetsi-po ny fihetsem-po sy ny fahaizan'ny olona mahatsapa fa toa tsy afaka mandray anjara amin'ny fiadanantsika ny mpiara-miasa.
Tsy marina izany. Ny fomba tokony anehoantsika fangorahana ny olon-tiana iray miaraka amin'ny fahaketrahana dia tsy mitovy amin'ny fomba anehoantsika fangoraham-po amin'ireo izay tsy manana aretin-tsaina.
Ny famoizam-po dia mety hanimba ny fifandraisana raha tsy ny fikaroham-bahiny no mitandrina.
Mora ny mandray manokana ny fanalefahana ary manapaka ny famoizam-po raha tsy fantatrao tsara.
Noho izany, andao hizaha fomba vitsivitsy hanamorana ny fitetezana fifandraisana amin'ny fahaketrahana, voalohany ho an'ny mpiara-miasa tsy misy fahaketrahana, avy eo ho an'ny mpiara-miasa.
Ho an'ny mpiara-miasa tsy misy fahaketrahana…
1. Ekeo fa tsy afaka manamboatra ny fahaketraky ny namanao ianao.
Ny famoizam-po dia aretina manimba izay mety mila fitsaboana, fanafody ary fiovan'ny fomba fiainana hanatsarana.
Tsy toe-javatra ahafahanao mampifaly ny namanao amin'ny filazanao azy ireo zavatra tsara na tsara.
Ny famoizam-po dia mety hanafoanana ny monologue anatiny sy hanakorontanana ny fizotry ny simika mamela ny olona iray hankafy fahafinaretana sy hahatsapa fifaliana amin'ireo karazana zavatra ireo.
Ny fanatrehana ny vadinao miaraka amin'ny fahaketrahana dia fomba tsara kokoa, na dia mety hampanaintaina aza izany.
Azo inoana fa mahita zavatra mahafinaritra maro momba ny olon-tianao ianao. Ny fanatrehana an'io olona io raha ny aretin-tsainy no mahatonga azy ireo hahatsapa na mahatsapa zavatra mahatsiravina momba ny tenany dia sarotra, saingy ilaina izany.
Tsy azonao atao ny manamboatra ny fahaketrahan'ny namanao. Tsy afaka manatrika sy manohana fotsiny ianao.
2. Mahaiza mandanjalanja amin'ny fanovana drafitra.
Zava-dehibe ny fahalefahana satria ny olona ketraka iray dia mety tsy ho afaka hanaraka ny drafitra rehetra kasainy hatao.
Andro vitsivitsy no tsara kokoa noho ny hafa. Andro vitsivitsy dia hiasa bebe kokoa ny vadinao noho ny hafa.
Ny drafitra natao tamin'ny herinandro lasa dia mety tsy hahomby amin'ity herinandro ity raha tsy afaka miala eo am-pandriana ny vadinao satria manana andro tsy dia salama mafy izy ireo.
Ny famoizam-po indraindray dia hanala azy ireo amin'ny fahafahany miasa amin'ny fomba mahazatra.
Ny fahatakarana sy ny fahaleovan-tena dia handeha lavitra amin'ny fihazonana ny firindrana eo amin'ny fifandraisana.
Eny, tsy mahafinaritra ny mikorontana toy izany, fa na ho ela na ho haingana.
Aza adino: ny andro sasany dia mora kokoa noho ny sasany.
3. Misafidiana ary safidio tsara ny adinao.
Ny famoizam-po dia mahatonga ny olona hieritreritra amin'ny fomba mainty sy fotsy.
Tiany ny manamafy ny fihetseham-po ratsy, toy ny fiheveran-tena ho ambany sy ny fahatokisan-tena, ary mahatonga azy ireo ho manan-danja kokoa noho izy ireo.
Ny fanehoan-kevitra tsy manan-tsiny dia azo adika amin'ny fomba ratsy izay miteraka fikorontanana. Ny tsikera kely dia mety hahatsapa ho fandavana maharary na fanafihana anao manokana.
Izay heverinao ho zavatra kely na tsy misy fotony dia mety alain'ny famoizam-po ka hipoaka ho zavatra lehibe sy mahavariana, toy ny fieritreretana fa tsy ho faly na hanana fifandraisana salama velively izy ireo.
Ny famoizam-po dia mety hanamafy ihany koa ny fahatsapana ho tsy afa-manoatra sy tsy misy fanantenana, manala ny fahafahan'ny olona mahatsapa fifehezana ny aretin-tsaina na ny fiainany.
Ny fifamaliana sy ny tsy fifanarahana dia hitranga amin'ny fifandraisana. Ny tsara indrindra dia ny misoroka ny fananana azy ireo rehefa ao amin'ny toerana maizimaizina ny olona iray satria tsy hieritreritra fomba mitovy amin'izay noeritreretiny izy ireo raha mandanjalanja kokoa.
Tsy midika izany fa tokony avelanao ny filanao manokana, fa fantaro fa ny fifanakalozan-kevitra saro-pady dia mety mila miandry andro tsara kokoa.
4. Miezaha tsy handray azy manokana.
Hisy ny fahatsapana negativa sy ratra handalo. Hisy ny fotoana tsy maha-olon-tianao ny olon-tianao noho ny fomba fandokoan'ny fahaketrahana ny fahitan'izy ireo an'izao tontolo izao sy ny fihetsem-pony.
Maharary ny mijery olona iray tianao ary mieritreritra fatratra ny hipetraka amin'io karazana habaka io.
Ny tena izy dia tsy afaka mivoaka avy ao aminy ny olona ketraka na manova ny fomba fiantraikan'ny famoizam-po azy ireo fotsiny. Ny fanatsarana amin'ny aretin-tsaina dia mety ho dingana maharitra sy maharary.
Arakaraka ny ahaizanao mametra ireo lafiny ratsy kokoa amin'ny fahaketrahana, dia ho mora kokoa ny hitahiry sy hamakivaky ny fifandraisana.
Tsy midika izany fa tokony hanaiky na hanaiky ny fanararaotana ianao, fantaro fotsiny fa mety hisy ny faharatsiana tsy fanaon'ny olon-tianao.
Ny fomba tsara indrindra anaovana izany dia ny fifantohana amin'ny lafy tsara eo amin'ny fifandraisanareo. Izany dia afaka manampy amin'ny fanoherana ny fihenan'ny fotoana.
5. Mampiasà fikarakarana tena sy hikarakarana ny fahasalamanao.
Ilaina ny fifandanjan'ny fikarakarana amin'ny fifandraisana. Ny mpiara-miombon'antoka dia tokony ho afaka mifampiankina rehefa mila izany fanampiana fanampiny izany mba hialana amin'izay fiainana manary azy ireo.
Ny olona iray ketraka dia mety tsy ho afaka hanome an'io fanampiana fanampiny io amin'ny fotoana rehetra.
Ny fiainana miaraka amin'ny famoizam-po dia mitaky hery ara-pientanam-po be loatra hivezivezy amin'ny fahatsapana ratsy rehefa mahafeno ny fitakiana fiainana.
Araho maso ny fahasalamanao ara-tsaina mba hahazoana antoka fa tsy mandany fotoana be loatra ianao ary handoro tena.
Hisy ny fotoana tsy ahafahan'ny namanao manome ny entany feno ara-pientanam-po amin'ny fifandraisana, ka ara-dalàna raha misy ny fotoana tsy fitoviana amin'ny asa ara-pientanam-po.
Na izany aza, tsy tokony ho zavatra maharitra mandrakizay izany. Hisy fotoana izay ilanao fotoana hanarenana ny batterie mampihetsi-po anao.
Ahoana ny fomba hanazavana izay tsapan'ny fahaketrahana amin'ny olona mbola tsy nahita izany
Zavatra 5 tokony hatao raha toa ka ambany ny tombam-bidin'ilay lehilahy tianao (+ Famantarana 6 hitadiavana)
Ahoana no fomba hangatahana fanampiana raha tsy mahatsiaro ho sadaikatra na manahirana
Ho an'ny mpiara-miasa amin'ny fahaketrahana…
1. Tadidio fa ny dokoteranao dia tsy mpitsabo na mpitsabo.
Ny maha-olona manana aretina ara-tsaina ao anaty fifandraisana dia sarotra noho ny fahatsapana ho meloka sy henatra mety hitranga.
Ny famoizam-po dia mety hameno ny eritreritrao sy ny fahatsapanao, hahatonga anao hihevi-tena ho ambany noho ny fitiavana tsy mendrika. Tsy marina mihitsy izany.
Ny marina dia ny sakaizanao dia tsy hiteny na hanao zavatra tsy mahatsapa loatra momba ny aretin-tsainao.
Tsy matihanina izy ireo. Tsy afaka manome karazana fanohanana sy fanampiana azon'ny dokotera na mpitsabo atao izy ireo.
Azon'izy ireo atao ny mamaky ny lahatsoratra rehetra ary manabe ny tenany tsara amin'ny fomba hahatongavana ho mpiara-miasa tsara amin'ny olona manana aretina ara-tsaina…
… Na izany aza, ny lahatsoratra rehetra eto amin'izao tontolo izao dia tsy afaka manomana olona iray amin'ny enta-mavesatra ara-pihetseham-po izay avy amin'ny fijerena olona tiana mijaly.
Sarotra amin'ny fientanam-po ny fijoroana ho vavolombelona amin'ny fijaliana ataon'ny olon-tiantsika marary saina. Ary miaraka amin'ny fahasahiranana ara-pihetseham-po dia tonga ny fihetseham-po misavoritaka sy be loatra izay mety tsy ho voahitsy amin'ny fomba tsara indrindra.
Hambara ny zavatra sy ny hetsika izay mety handratra amin'izao fotoana izao.
Ny mpiara-miasa aminao dia mety ho ampahany sarobidy amin'ny tambajotram-panohanana anao, saingy tsy soloina ny fitsaboana sy ny asa manatsara izany.
Aza manantena ny olon-tianao hanao tsara amin'ny fanohanana anao amin'ny fotoana maizina indrindra. Zavatra iray mitaky fampiharana sy fandriam-pahalemana amin'ny toe-javatra, izay tsy ananan'ny olona maro.
2. Mamolavola tambajotra fanampiana lehibe kokoa ivelan'ny mpiara-miasa aminao.
Ny mpiara-miasa amam-pitiavana dia olona iray eo amin'ny laharana voalohany amin'ny tambajotranao mpanohana.
Tsy ho afaka ny tsy ho izy ireo satria raha mandeha tsara ny raharaha dia mety handany fotoana be dia be manodidina an'io olona io ianao.
Raha lazaina izany dia tsy afaka ny ho mpanohana tokana anao hiatrehana sy hiasa handresena ny fahaketrahana ianao.
Ny asa ara-pihetseham-po goavambe fotsiny dia betsaka ny olona tsy ampy fitaovana hiatrehana izany.
Mety te haniry izy ireo, saingy mety tsy ho afaka.
Rehefa dinihina tokoa, ny tsirairay dia samy manana ny entany sy ny entana entiny miatrika izany.
Miezaha manangana ny tambajotram-panohananao ivelan'ny olon-tianao. Mety ho namana hafa izany amin'ny tolona ara-pahasalamana, vondrona mpanohana, na mpitsabo.
Mety hanampy ihany koa ny fananana hetsika hafa voalahatra tsy tapaka hivoahana ary hanao zavatra ara-batana sy hiasa.
Na dia tsy fanohanana ara-pihetseham-po amin'ny fomba mahazatra aza izany, ny fanatanjahan-tena ara-batana sy ny fananana zavatra andrasana dia mety ho mpanampy fanampiny hanampy anao hampiorina ny tenanao rehefa mila izany.
3. Mikasa ny rehefa mivadika ho ratsy ny famoifoizana.
Ny fomba tsara indrindra hialana amin'ny fahavoazana rehefa miharatsy ny fahaketrahana dia ny fananana drafitra mialoha.
Fantatrao ve ny zavatra sasany azon'ny namanao atao mba hanampiana anao hiatrika fahasalamana lehibe?
Fanatanjahan-tena? Torimaso fanampiny? Asa atao?
Ampidiro ao anatin'ny drafitrao araka izay tratry ny anananao ny namanao mba hahafahan'izy ireo manampy anao amin'ny alàlan'ny fomba misy dikany ho anao.
Indraindray ny famoizam-po dia hahatonga ny olona hanosika olona hafa hahafahany irery irery.
Amin'ny fotoana hafa dia mety noho ny famoizam-po no mahatonga azy ireo hahatsapa ho toy ny hoe tsy tiana izy ireo na tsy mendrika ny fitiavana sy fanohanana.
Ny fotoana irery dia afaka manao fahagagana ho an'ilay olona izay mila fotoana mangina fotsiny amin'ny tenany mba hamakivakiana azy. Azo ampidirina ao amin'ny drafitra ankapobeny izany.
Ka manaova fotoana sy fotoana hanaovana zavatra samirery kely, raha fantatrao fa hanampy izany. Miankina amin'ny fifandraisanao amin'ny olona fotsiny izany rehefa tsy salama ianao.
4. Sorohy ny fifanakalozan-kevitra sy ny fanapahan-kevitra ara-pientanam-po raha mbola tsy salama tsara ianao.
Ny famoizam-po maharitra dia misy fahasamihafana isan-karazany. Indraindray tsy dia ratsy loatra. Indraindray dia toerana ratsy tarehy sy lao izy io.
Ho an'ny olona salama ara-pientanam-po, ny fahalalana izay ady tokony hiadiana ary rahoviana no ampahany manan-danja tokoa amin'ny fitazonana fifandraisana tsara.
Ho an'ny olona ketraka, dia vao mainka sarotra kokoa izany satria ny famoizam-po dia misy fiatraikany ratsy eo amin'ny fahitanao sy ny fahatsapanao izany.
Izany no antony ratsy hevitra ny manandrana mifanakalo hevitra ara-pihetseham-po lalina na mandray fanapahan-kevitra manan-danja raha mbola tsy salama mafy ianao.
Sarotra ny mieritreritra amin'ny fomba fijery sy fihetsem-po izay miseho ny fahaketrahana, izay midika fa mety ho sahirana ianao hahita ny toe-javatra amin'ny fomba tsy miandany na miabo.
Izany dia miteraka fifandonana tsy ilaina sy fahatsapana mandratra izay tsy mila mitranga raha azo ahemotra mandra-pahatongan'ny fotoana hahatsapanao ho salama saina kokoa.
Fa tsy miandry antsika foana ny fiainana. Indraindray ianao dia mila manao an'io zavatra io, na inona na inona tsapanao.
Amin'izany fotoana izany dia afaka manampy anao handamina ny zava-misy amin'ny fahatsapana toe-javatra iray ny lisitra Pros sy Cons miorina amin'ny zava-misy.
Tsy misy fihetseham-po amin'izy ireo ny zava-misy. Noho izany dia manao metric tsara kokoa izy ireo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra rehefa tsy mandeha ara-pientanam-po ny raharaha.
5. Mandraisa anjara amin'ny fanohanana ara-pihetseham-po azonao atao.
Ny fifandraisana tsara dia ny fifandanjana. Ireo olona voarohirohy dia mety mifandanja, mifampisondrotra rehefa milatsaka, ary miasa mba hitazomana ny ekipa ho salama sy matanjaka.
Mety ho zavatra sarotra atao izany rehefa miaina miaraka amin'ny fahaketrahana koa ianao.
Ny famoizam-po dia mandroba ny olona iray amin'ny heriny ara-pihetseham-po sy ara-batana indraindray. Hisy fotoana hahatsapanao ho tsy afaka manome ny fanampiana ilain'ny vadinao, ary tsy maninona izany. Ny toetran'ny bibidia ihany.
Ny tena zava-dehibe dia ny ezaka ataonao handraisana anjara asa fanampiana ara-pihetseham-po azonao atao rehefa vitanao.
Mety tsy dia be loatra izany, ary toa tsy dia misy dikany loatra izany, fa mampiseho amin'ny olon-tianao kosa fa manao izay vitanao ianao.
Ny ezaka dia manisa zavatra betsaka amin'ny fifandraisana, koa andramo ny miseho arak'izay tratranao rehefa mila anao ny namanao, na dia tsy mahay manao tsara indrindra aza ianao.
mianatra mamelà ny lasa
midika hoe fifandraisana lava be eo amin'ny maso maharitra
karatra fihaonan'ny mpanjaka 2017